News Collection: करोडपति कम्युनिस्टका अनेक कीर्तिमान
करोडपति कम्युनिस्टका अनेक कीर्तिमान
काठमाडौं, साउन २२ । गोर्खामा जन्मिएर राज्यको अकूत सम्पत्तिमाथि ढलीमली गर्ने चिरञ्जीवी वाग्ले अहिले कहाँ छन्? सबैलाई थाहा छ। त्यस्तै, सुडान प्रकरणमा ओमविक्रम राणालगायत दर्जनौं प्रहरी हाकिम डिल्लीबजार सदरखोरको पाहुना बन्नुपरेको दृश्य नेपालीका आँखामा झल्झली छ। सायद, बूढापाकाले ठीकै भनेका रहेछन्, आफ्नै पसिनामा भर नपरी छलकपट र ठगी गरेर जोडेको सम्पत्तिले मान्छेलाई पापको भारी मात्रै बोकाउँछ। र, यस्तो भारी कांग्रेसले मात्रै किन? आखिर माओवादीले पनि बोक्नै पर्दोरहेछ।
आ186ना पिता गिरिजाप्रसादको शासनकालमा सत्ताको आडमा अकूत सम्पत्ति जोडेकी सुजाता कोइरालाका ज्वाइँ रुबेल चौधरी सुडान प्रकरणमा नाम मुछिएपछि बंगलादेशतिर भागिसकेका छन्। एकैपटक करोडौं कमाउन खोज्दा ठेकेदार शम्भु भारतीको पनि निद्रा बिग्रिएकै छ। यसरी रातारात धनी भएकाहरू आतंकित भइरहेका वेला अकस्मात् करोडपति बनेका एकजना माओवादी नेताका ज्वाइँको पनि निदहराम हुनु स्वाभाविकै हो। तर, फरक यत्ति मात्रै हो कि प्रचण्डपथको छातामुनि उनले कमाएको 'रातो' सम्पत्तिमा अहिलेसम्म अख्तियारचाहिँ पसिहालेको छैन। प्रसंग हो, बाग्लुङ बिहुँ गाविसको गरिब परिवारमा जन्मिएर हाल करोडपति बनेका माओवादी प्रवक्ता दीनानाथ शर्माका ज्वाइँ शुभशंकर कँडेलको। हाल एबिसी टेलिभिजनको मालिक रहेका कँडेलले शनिबार राति ९ बजेर ३९ मिनेट जाँदा आफ्नो फेसबुकमा यस्तो स्टाटस लेखेका छन्– 'प्रज्ञा भवनको कार्यक्रमपछि आजका दिनसम्म लगातार हरेक बेलुका चारदेखि दशवटासम्म फोन आउने गरेका छन्। ती कलवालाहरूले एकोहोरो रूपमा मलाई सिध्याइदिने धम्की दिइरहेका छन्। प्रचण्डलाई त अल्पमतमा पारियो भने तैंले के फुर्ती गरेको छस्, अब तेरो प्रचण्ड रहँदैन र तेरो टेलिभिजन पनि रहँदैन, कसरी जोगाउन सक्छस्, जोगाएर देखाजस्ता धम्की आजसम्म रोकिएका छैनन्।' तर, कँडेलमाथि त्यसरी धम्की आउनुपछाडि उनको विशुद्ध पत्रकारिता पेसाले मात्रै काम गरेको भने होइन। कारण हो, उनको विवादास्पद एवं अपारदर्शी गतिविधि र सम्पत्ति। एकाध वर्षअघिसम्म गोंगबुस्थित एउटा प्राइभेट शिक्षण संस्थामा अध्यापन पेसामा संलग्न कँडेल अप्रत्यासित रूपमै केही वर्षयता करोडपति बनेका छन्। महाराजगन्जमा उनको आलिशान बंगला, महंगो गाडी र टेलिभिजनमा करोडौं लगानी रहेको छ। कँडेललाई कसैले धम्की दियो, त्यो दुःखद् कुरा हो, तर उनको सम्पत्तिको स्रोत के हो? यसबारे जिज्ञासा राख्दा उनी जवाफ दिन अस्वीकार गर्छन्। अदृश्य स्रोतबाट कँडेलले राजधानीमा घर र राम्रो ओछ्यान त किनेका छन्, तर भनिन्छ, पैसाले राम्रो निद्रा किन्न सकिँदैन। राम्रो निद्राका लागि त्यो थारै किन नहोस्, सम्यक् कमाइ आवश्यक पर्छ। 'भ्रष्टाचारीलाई कीरा परोस्' भन्ने नाराले लोकप्रियता पाउन थालेको नेपाली समाजमा धनी र सुकिलो हुँदैमा गतिलो मान्छे भइन्न, यसका लागि असल मान्छे हुनुपर्छ भन्ने भावना जति–जति बढ्नेछ, त्यति–त्यति रातारात करोडपति हुने कँडेलहरूको मनमा सायद यसैगरी, अशान्तिले डेरा जमाउनेछ भन्ने कुरा उनको फेसबुक स्टाटसले नै प्रष्ट पारेको छ। यसैसाता प्रज्ञाभवनमा प्रचण्डलाई सहयोग पुग्नेगरी टेलिभिजन कार्यक्रम आयोजना गरेपछि र नयाँ पत्रिकामा प्रचण्डको भक्ति गर्दै लेख लेखेपछि कँडेल थप विवादमा तानिएका हुन्। स्रोतका अनुसार प्रज्ञा भवनको कार्यक्रम एबिसी टिभीको आफ्नै ब्यानरमा गर्ने भनिए पनि कँडेलले कृष्ण केसीको सर्वहारा कोषसित मिलेर गर्न प्रस्ताव गरेका थिए। तर, केसीले अन्कनाएपछि तत्कालै प्रगतिशील नागरिक समाज नामको भुइँफुट्टा संगठन जन्माइयो र त्यसैको ब्यानरमा कार्यक्रम गरिएको थियो।